Abokufika abanezitolo banovalo lokuhlaselwa | Scrolla Izindaba
Abokufika abanezitolo banovalo lokuhlaselwa
Kuqale kwaba i-Covid-19, manje sekufuneka amaphepha asemthethweni.
UThemba Tembo osuka e-Zimbabwe, usehlale eNingizimu Afrika kusukela ngonyaka wezi-2006 – engenazo izincwadi ezifanele.
Uke wahlangabezana nezikhathi ezinzima phambilini kodwa manje ukhathazeke kakhulu.
Umnikazi we-spaza e-Alexandra uzwile ukuthi uhulumeni wase-Gauteng uhlela ukuvimbela labo abangenawo amaphepha asemthethweni ukuthi basebenze. Bafuna kube ngabantu basendaweni abaphatha amabhizinisi asemalokishini.
Lokhu kumenza angalali ebusuku njengoba uThemba ezoba ngomunye wabazobanjwa.
Uthi akanayo imvume yokuhweba ibhizinisi lakhe.
Mhla efika kuleli, wazama ukufuna umsebenzi kodwa wangawuthola. Ngakho-ke waqala ibhizinisi lakhe.
“Sengidayise yonke into kusukela kwimifino nokudla kule minyaka emihlanu edlule. Akukho engingakwenza e-Zimbabwe futhi anginayo imali yokubuyela ekhaya. Ngondla amalungu omndeni ayi-16 ngenzuzo yami, amanye awo ase-Zimbabwe. ”
Isimo sokukhoseliswa sikaThemba, siphelelwe yisikhathi ngenkathi izwe likwizinga lesihlanu lomvalelo. Uthe ukubuyela e-Zimbabwe akukho ezinhlelweni zakhe.
“Ngazi abantu abaningi abanezitolo ezingama-spaza eziphumelelayo elokishini futhi abangenawo amaphepha. Ukusisusa kuzothinta abantu abaningi esibasizayo ngokubanika igilosa ngesikweletu,” kusho uThemba.
Ubuye wengeza ngokuthi, abanye abahola impesheni beza kubo uma imali yabo yesibonelelo sokuguga isiphelile, baye bafike bezocela ukudla ngesikweletu. “Siyabasiza ngoba sihlala sonke,” kusho uThemba.
UThemba uthe, yize ehlangabezana nezinkulumo eziphikisana nabokufika ezivela kwabanye kulendawo ahlala kuyo bemusabisa ngokushisa isitolo sakhe, uncamela ukufela esitolo sakhe kunokubulawa indlala e-Zimbabwe.
UAminah Noldeno wase-Mozambique uthe, akazi ukuthi uzokwenzenjani uma uhulumeni wesifundazwe esebenzisa lo mthetho kuleli lokishi.
“Angikwazi ukuthola umsebenzi futhi awukho umsebenzi engikwazi ukuwenza. I-spaza sami isona kuphela umthombo wami wemali wokondla izingane zami ezine nabazukulu abathathu.”
Uthe izinto bezinzima ngesikhathi somvalelo ngoba abantu bokufika abenjengaye bebe ngawatholi amaphasela okudla.
“Ngesikhathi sithola amaphasela okudla, sacelwa ukuthi sinikeze izinombolo zomazisi engingenazo. Manje njengoba sesiqala ukusebenza, nemali isingena, sekunomthetho omusha ozayo ozosihlupha futhi. Ngiyesaba,” kusho uAminah.
UAminah uthe, usethuthukise ibhizinisi lakhe kusukela ekudayiseni imifino ekhoneni lomgwaqo kuze kube manje njengoba esenesitolo esiphelele. “Ngisebenze kanzima futhi ngisebenza kahle nabantu bendawo.”
Ikhansela lewadi lase-Alexandra uAdolf Marema, uthe isinqumo besiside kakhulu.
“Ohulumeni abaningi ngaphandle kwaseNingizimu Afrika babeka izakhamuzi zabo phambili.
Yize kunjalo, uMarema uxwayise ngokuthi lolu hlelo alulungiswanga kahle.
“Alukho ucwaningo, futhi abantu bendawo abanalo ulwazi lokwenza ibhizinisi nokuphathwa kwemali. Lezi yizisekelo okumele uhulumeni agxile kuzo ngaphambi kokuthatha ibhizinisi kubantu abondla abadala nabangasebenzi,” kusho uMarema.
Uthe ngaphambi kokuthi abokufika basungule amabhizinisi, abantu baseNingizimu Afrika babephethe amabhizinisi kuleli. Kodwa lokho akusebenzanga ngoba bekungekho ukwesekwa okuvela kuhulumeni mayelana nokuqeqeshwa kwezamabhizinisi.
“Lolu hlelo luzohluleka,” kuxwayisa uMarema.